Goal Setting & Lasting Motivation (GSM) • Toe Tet
Today Promotion = 29,000 MMK
Motivation 101 သင်တန်းကတော့ ရည်ရွယ်ချက်ပျောက်နေတဲ့ သူတွေနဲ့ ရည်မှန်းချက်ရှိပြီး Motivation စိတ်ဓာတ်လှုံ့ဆော်မှုအားနည်းနေတဲ့သူများအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်။ Motivation နဲ့ပတ်သက်လို့ လေ့လာသူများ၊ လူအများနှင့် ဆက်ဆံပြောဆိုနေသူများအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်။
1. Introduction to Motivation 101
5. Ultimate Success Formula
7.3Questions to boost your EQ
8.4Massive Intelligent Questions
မိမိအတွက်သာမက မိမိနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွင် Motivation Theory နဲ့ အယူအဆများကို လက်တွေ့အသုံးချနိုင်မည်။ လက်ရှိထက်ပိုပြီး စိတ်ခံစားမှုများကို ထိန်းချုပ်လာနိုင်မည်။
✔️အောင်မြင်မှုကို ဆာလောင်နေသော လူငယ်များ
✔️ဘဝမှာ အပြောင်းအလဲ မလုပ်လိုသူများ
Dr. Phyo Paing သည် Y.E.C Learning Center ကို စတင်တည်ထောင်သူ၊ Lecturer & Trainer စွန့်ဦးတီထွင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် Marketing အကြံပေးအနေဖြင့်ပြုလုပ်ပေးနေပြီး၊ ကုမ္ပဏီ အချို့ကို digital marketing ပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
မားကတ်တင်းနှင့် စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုကို သင်ကြားသည်မှာ ၄ နှစ်ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပြီး UK diploma တက်ရောက်နေသည့် ကျောင်းသားများ၊ working professionals များနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကို Marketing နှင့် Business Management ဘာသာရပ်များပို့ချပေးလျက်ရှိပါသည်။ နိုင်ငံတကာ ကုမ္ပဏီတွင်ဝန်ထမ်းလုပ်ဖူးသည့်အပြင် ကိုယ်တိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နေပါသဖြင့် ဘေးလူအမြင်၊ ဝန်ထမ်းအမြင်နှင့် အလုပ်ရှင်အမြင် ရှုထောင့်သုံးခုစလုံးမှ တွေးပေးနိုင်သည့်အတွက် သင်တန်းသားများအတွက် အများကြီးအကျိုးရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
မန္တလေး ဆေးတက္ကသိုလ်မှ M.B.,B.S ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီး ABE (UK) မှ Graduate Diploma in Business Management အပြင် MBA ကို ရရှိထားပါသည်။ University of Mandalay မှ စေလွတ်သည့် Asia ထိပ်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်သည့် Indian Institute of Management ကို သွားရောက်လေ့လာခဲ့ပါသည်။
Marketing ဘာသာရပ်နှင့် အသုံးချစိတ်ပညာဘာသာရပ်များကို အထူးပြုလေ့လာပြီး Bangkok ရှိ NLP Top Coach မှ နိုင်ငံပေါင်း ၁၆ မှ သင်တန်းသား ၃၀ ကျော်တွင် NLP Superstar ဆုရရှိခဲ့ပြီး American Board of NLP မှ အသိအမှတ်ပြု Certified Master NLP Pratitioner, Certified Master Timeline therapist နှင့် Certitified Master NLP Coach ဖြစ်ပါသည်။
ဆရာအနေဖြင့် Marketing, စွန့်ဦးတီထွင်မှု Entrepreneurship နှင့် Supply Chain Management Certificate များကို Massachusetts Institute of Technology, Wharton University of Pennsylvania နှင့် University of Maryland တို့မှရရှိခဲ့ပါသည်။
ဆရာ့အနေဖြင့် Business Management နှင့် Marketing ဘာသာရပ်များကိုသင်တန်းသားပေါင်း 20000 ကျော်ကို သင်ကြားပို့ချပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
3. How & Role Model
What's Preventing You
2 P of Motivation
MIA3-4Questions
Final6Empowering Beliefs
Pain Vs Pleasure examples
Unlock Your Potential for Success